सरकार, परदेशिका आँशुले पोल्ला ! - Gulminews
२०७७ भाद्र ११, १३:५५
अहिले परदेशमा नेपालीहरु रोइरहेका छन् । आशुँ बगाइरहेका छन् । घर फोनमा कुरा गर्दा मन थामेर बोलेपनि भित्रैदेखि उनीहरुको मन थामिएको छैन । देशमा रोजगारी नभएर आफु र आफ्नो परिवार पाल्नकै लागि बाध्यताले वैदेशिक यात्रामा गएका नेपालीहरु यतिबेला धेरै समस्यामा परेका छन् । एकातर्फ कोरोना संक्रमणले गर्दा विदेशमा पनि काम पाइएको छैन । जसले गर्दा कैयौँ दिन भोकभोकै बस्नुपरेको समाचारहरु आइरहेका छन् । भने अर्कोतर्फ सरकारले स्वदेश ल्याउन पनि आनाकानि गरिरहेको छ ।
नेपालमा लकडाउन हुदाबखत भारत र अन्य कुनै पनि मुलुकबाट स्वदेश नल्याउने सरकारको नीति थियो । तर भारतबाट जबरजस्ति नागरिक आउन थाले । चौतर्फी रुपमा नागरिक ल्याउन सरकामाथि दबाब बढ्दै गयो । जसले गर्दा सरकार नाका खोल्न बाध्य भयो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक स्वदेश ल्याउने बिषयमा बसह चर्किएको छ । सरकार उनीहरुलाई ल्याउन तयार छ । तर उसले तोकेका सर्तमा मात्र । जसअन्तरगत महँगो हवाई भाडा, पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य, काठमाडौ आइसकेपछि सरकारले तोकेको मात्र होटलमा बस्ने लगायत छन् । यसो गर्दा एक जना नेपालीको घर आउदा ६३ हजार छ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ । नियमित काम चल्दाको भन्दा नचलेको समयमा एयरलायन्सहरुको भाडादर महगोँ छ । यसमा पनि दैनिक पाचँ सय जना मात्र नेपाल आउन पाउने कोटा सरकारले सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा परदेशिहरु स्वदेश आउने कुरा ‘आकाशको फल, आखाँ तरी मर्’ जस्तै भएको छ । यदि यहि गतिमा सरकारले काम गर्ने हो भने, बाहिर रहेका नेपालीहरु स्वदेश आउन दुई सय दिन अर्थात साढे छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ ।
स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तीमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन् । यसको नियन्त्रण र नियमनमा पनि सरकार उदासिन देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले २ लाख १० हजार ८ सय ७१ जनालाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र त्यसबाहेक ३ लाख ७७ हजार जना नेपाली विदेशबाट आउन चाहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ६ लाख श्रमिक नेपाल फर्कन चाहेको तथ्यांक दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ८ लाख ९० हजार श्रमिकसहित १५ लाख ९० हजार नेपाली कोभिड–१९ का कारण फर्कने अनुमान गरेको छ । तर उनीहरुलाई कसरी स्वदेश फर्काउने ? सरकारसँग कुनै योजना छैन ।
सर्वोच्चको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन
कोभिड–१९ का कारण रोजगार गुमाएका र तत्काल घर फर्कन चाहाने श्रमिकहरुलाई सर्वोच्च अदालतले समेत वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी नि ः शुल्क स्वदेश फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । तर आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसको करिब दुई महिनापछि २९ असारमा सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ कार्यविधि पारित गर्यो  । कार्यविधिअनुसार श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकका दूतावासमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर, उद्धारको कार्य भने अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो सच्याउनु जरुरी छ ।
लकडाउनका कारण अलपत्र श्रमिकहरू रोजगारदाताको अमानवीय र शारीरिक यातनाको सिकार भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । दमनका विषयमा उजुरी गर्दा पनि नेपाली दूतावासले कुनै चासो नदिएको गैरआवासिय नेपालीहरुले बताउने गरेका छन् । उनै परदेशिहरुले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट तलब खाएका दुतावासका कर्मचारीहरुले आफ्नो लाचारीपन सच्याउनुपर्छ ।
यतिबेला सत्ता र सरकार सञ्चालकहरुलाई मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नातागोतालाई राजनीतिक नियुक्ती दिने, पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउने तथा सामान खरिद प्रकरणमा अर्थोपार्जन गर्नेतर्फ चटारो परेको देखिन्छ । भने प्रतिपक्षलाई पनि पार्टीभित्र आफ्नै गुट बलियो बनाउने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना नातागोता पार्न लभिङ गर्ने लगायतका काममा चटारो बढेको देखिन्छ । नीति, नियम र सिद्धान्तमा देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने उदेश्य राखेर खोलिएका राजनीतिक दल यतिबेला कमिसन र बेतिथिको दलदलमा फसेको देख्दा कुनचाहिँ परदेशीको मन रुन्न होला र ? अहिलेको शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दल नै सर्वोपरि हुन्छ । यसमा दुईमत छैन । तर दलका प्रतिनिधिहरुले सबै नागरिकको भन्दा पनि आफ्नो केहि मिमित स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेकोले नागरिकहरुमा दल र दलका नेताप्रति वितिष्णा पैदा भएको छ ।
अन्त्यमा, परदेशमा नेपाली नागरिक अलपत्र परेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले मानवता देखाएर उद्धार नगरि पछि हट्नु भनेको सरकार उल्टो बाटोमा हिडेजस्तै हो । आजसम्म नागरिकले सक्दो योगदान राज्यलाई दिए । अझै पनि स्वदेश वा विदेशबाट नागरिकले देशलाई साथ दिएकै छन् । नाकाबन्दी, भूकम्प, सिमा अतिक्रमण, लकडाउन कार्यान्वयन जस्ता बिषयमा नागरिकले सरकारलाई साथ दिदैँ आएका छन् । अब विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्नैपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो । सरकारलाई यति कुरा ख्याल रहोस् की, नेपालीहरुहरु रहरले होइन, बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन् । आजसम्म उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकार सञ्चालन गर्ने अनि उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने ? यस्तो गर्न मिल्दैन । विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुको उद्धारमा ढिलाई गर्ने हो भने, सरकार र राज्यसत्ता सञ्चालकहरुलाई हेक्का रहोस्, कुनै दिन परदेशिको आशुँले पोल्नेछ ।
(लेखक पोखरेल गुल्मीमा पत्रकारितामा क्रियाशिल छन् ।)
हुमाकान्त पोखरेलगुल्मी २८ मंसिर । नेपाली काङ्ग्रेस सत्यवती गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको निर्वाचनअघि आप्mनो पार्टी निर्वाचित भए
महेन्द्र भण्डारीअहिले कोरोना माहामारीले बिश्वनै भयभीत भएको अवस्था रहिरहँदा नेपालमा पनि यसले निकै नाजुक अवस्था
संगीता विश्वकर्मादरखाने दिनको बिहानी डयुटी जाने तरखर गर्दै थिएँ । आमाले मलिन स्वरमा फोनमा भन्नुभयो
बबिता कुँवरअसार १८ गते हाम्रो खेत रोपाई थियो । हामी खेत सम्मको ४५ मिनेटको हिडाँइ